Ochwepheshe Bamaprojeke Okufakela Umoya Ezimbonini Nawobunjiniyela
I-Kooltron yifemu yonjiniyela eseKapa ekwazi ukuklama ngokwesidingo, ukuvumelanisa noma ukuthuthukisa noma yiphi isisitimu yasembonini yokufaka umoya yobukhulu obumaphakathi kuya kwenkulu kufanelane nezidingo zekhasimende.
njengoba iwumakhi-mpahla onelayisense ye-OEM, i-Kooltron inethimba elinamakhono aphezulu neshabhu elihlome laphelela okusinika amandla okuklama nokwakha uhlu olubanzi lwemikhiqizo yeqophelo eliphezulu ngamanani akahle.
I-Software Yokukhetha Iziphephethi Ebamba Nxazonke YAMAHHALA
I-Kooltron iye yaklama ngokwesidingo ithuluzi lokukhetha iziphephethi (fans) elibamba nxazonke ukuze kube lula kuwe uku-oda. Vele ufake imininingwane yakho yokukhetha bese kuthi le software izobe isiveza isiphephethi esifanela kahle kakhulu i-aplikesheni yakho.
Le software ikuvumela ukuba wenze ukujasta kokukhetha (adjust) okubamba nxazonke (interactive) ekhophini eprintekayo yokugoba kwesiphephethi. Uma sewenele, vele uthumele okukhethile nge-email ucele ikhothesheni e-Kooltron.
DAWUNILODA LE SOFTWARE
I-Kooltron yamiswa ngo-1968 futhi yalokhu izenzela igama njengochwepheshe bokupholisa kokuhwamukisa. Nokho, kula mashumi eminyaka amuva siye sandisa amasevisi ethu saba umbambi-qhaza obalulekile kuzo zonke izici zamasisitimu okufakela umoya asezimbonini obukhulu obumaphakathi kuya kwamakhulu asukela enanini lika-R10 000 kuya ku-R4.8 izigidi.
Nakuba saqala ngokuzakhela iziphephethi zokusetshenziswa kwawethu amaprojeke manje sesiphenduke ifemu ebalulekile emakethe mayelana nokukhiqizela abanye iziphephethi.
I-Kooltron iyilungu elirejistiwe le-Steel and Engineering Industries of South Africa (SEIFSA), i-Chamber of Commerce kanye ne
Construction Industries Development Board (CIBD) futhi ibekwe kuQophelo le-M4.
Sithinte ngefoni noma i-email ukuze uthole ukwaziswa okuthe
Amaprojeke Ahamba Phambili
Ohhavini Bokushisisa Nokomisa Kuqine
Ukukhishwa Kothuli Kusetshenziswa Izisefo Ezihamba Nyovane
Isisitimu Yokukhishwa Kothuli Kusetshenziswa Isikorobho Samanzi I-Venturi
Isisitimu Yokukhipha Upende Ngokudonsa
Amasevisi Okufaka Umoya Nokudonsela Ngaphandle
Ukukhiphela Ngaphandle Uthuli, Izibi kanye Namancwelo
Imikhiqizo Yepuleti Lesitili Neyeshidi Lensimbi
Izipholisi -moya Ezisebenza Ngomhwamuko